Awooda Haydarooliga: hawlgal, faa'iido iyo faa'iido darro | Cusbooneysiinta Cagaaran
Maanta waxaan u nimid inaan ka hadalno tamar dib loo cusboonaysiin karo oo ka mid ah kuwa ugu badan ee la isticmaalo. Ku saabsan yahay awood Haydarooliga. Waa nooc ka mid ah tamar nadiif ah awood u leh inuu u beddelo tamarta cufis-jireed ee jir biyo ahi u yeesho tamar koronto. Halkan waxaan ku sharixi doonaa talaabo talaabo ah sida tamartaan loo soo saaray iyo waxa loo qabtay si looga faa'iidaysto.
Ma rabtaa inaad wax badan ka ogaato tamarta korontada laga dhaliyo? Kaliya waa inaad sii wadataa aqrinta 🙂
1 Waa maxay tamarta Haydarooliga?
2 Sidee u shaqeysaa?
3 Dhirta korontada laga dhaliyo
4 Berkedda korantada
5 Saldhigga tamarta korantada
6 Taariikhda tamarta korontada
Waa maxay tamarta Haydarooliga?
Aynu ku bilowno tilmaamida markale inay tahay il la cusboonaysiin karo oo gebi ahaanba nadiif ah. Waad ku mahadsan tahay, koronto ayaa la soo saari karaa iyada oo aan wasakheyn ama xaalufinin kheyraadka dabiiciga ah. Tamartaani waxay isku dayeysaa inay u beddesho tamarta culeyska culeyska ee jir biyo ah ay u leedahay kor u qaadista tamarta tamarta si looga adkaado kala duwanaanta dhererka. Tamarta farsamada ee la helo waxaa si toos ah loogu isticmaali karaa in lagu dhaqaajiyo wiishka marawaxadaha si loo soo saaro tamar koronto.
Tamarta noocan ahi gebi ahaanba waa nadiif maxaa yeelay waxay ka timaaddaa wabiyada iyo harooyinka. Abuuritaanka biyo xireenno iyo marinno qasab ah ayaa si weyn u kordhiyay suurtagalnimada iyo awoodda koronto dhalinta. Sababtuna waa Waxay keydin kartaa biyo faro badan waxayna u isticmaali kartaa inay dhaliso tamar.
Waxaa jira dhowr nooc oo ah tamarta korontada laga dhaliyo. Midka koowaad waxaa laga helaa gobollada buuraha. Iyagoo ka faa’iideysanaya dhererka ay diiradda saaraan samaynta boodboodayaasha ilaa heerarka sare ee dayrta. Nooca kale ee dhirta waa biyaha dareeraha ah waana la isticmaalaa maydadka waaweyn ee biyaha webiga oo ka adkaaday kala duwanaanshaha yar yar ee dhererka. Waa la dhihi karaa mid ayaa tamar yar ku abuura waqti gaaban kan labaadna si tartiib tartiib ah ayuu u dhaliyaa.
Biyaha ku jira harada ama berkedda macmalka ah waxaa loo sii mariyaa marinnada hoose ee tubbada. Sidan oo kale waxaa suurtagal ah in loogu beddelo tamarteeda suurtagalka ah cadaadis iyo Tamarta jirka mahadsanid qeybiye iyo marawaxadaha.
Tamarta farsamada waxaa loo beddelaa matoor koronto iyadoo ay ugu wacan tahay ifafaalaha soo-kicinta elektromagnetic. Sidan ayaad ku heleysaa koronto. Saldhigyada bamgareynta ayaa loo sameeyay inay keydiyaan tamarta sidaas awgeedna waxaa lagu heli karaa waqtiga baahida ugu badan. Maaddaama ay suurtagal noqotay in la falanqeeyo, nidaamyada kaydinta tamarta la cusboonaysiin karo ayaa xad u leh horumarkiisa.
Dhirta korontada laga dhaliyo
Dhirta korantada laga dhaliyo, biyaha waxaa lagu shubayaa taangiyada sare iyadoo la isticmaalayo tamar la soo saaray oo aan loo baahnayn habeen. Sidan oo kale, inta lagu jiro maalinta baahida korantadu ugu weyn tahay, meydad dheeri ah oo biyo ah ayaa la bixin karaa. Nidaamka bambooyinku waxay leeyihiin faa iidada ay u oggolaadaan tamarta in lagu keydiyo daqiiqado gaar ah oo la heli karo si loogu isticmaalo xilliyada baahida.
In kasta oo xaqiiqda ay leedahay faa iidooyin badan oo ah inay tahay tamar aan wasakh lahayn, dhismaha biyo xireenno iyo togag waaweyn ayaa sababa saameyn deegaanka. Kaliya maahan dhismaha biyo xireenno, haddii aysan ahayn keydyo macmal ah, daadadka carrada waaweyn, iwm. Waxay waxyeelleeyaan xaaladda nidaamka deegaanka dabiiciga ah.
Waxaa loo isticmaalaa in lagu soo ururiyo biyaha webiga. Waa weel macmal ah oo u adeegta keydinta biyaha. Qaybta ugu weyn waa biyo xireenka. Waad ku mahadsan tahay biyo xireenka, joogga lagama maarmaanka ah ayaa la gaarey si markaa biyaha mar dambe loo isticmaali karo sababo la xiriira farqiga u dhexeeya heerka.
Laga soo bilaabo berkedda ilaa warshadda korontada ee ay ku yaallaan koronto-dhaliyeyaasha waxaa ku yaal dariiq qasab ah. Hadafkeedu waa in la doorbido xawaaraha bixitaanka ee garbaha marawaxadaha. Furitaanka hore waa ka ballaaran yahay kana sii yaraanayaa si loo kordhiyo xoogga ay biyuhu uga soo baxaan.
Saldhigga tamarta korantada
Warshadda korontada ayaa ah mid leh taxaddar hawlo injineernimo Haydaroolji ah oo lagu meeleeyay taxane gaar ah. Mashiinnada ayaa leh ujeeddada loo diyaariyey inay ka helaan soosaarka korantada tamarta hidda. Biyaha waxaa loo qaadaa hal ama in kabadan oo marawaxadaha oo wareegaya mahadnaqa cadaadiska biyaha. Marawaxad kastaa waxay ku xidhan tahay beddel kaas oo mas'uul ka ah u wareejinta dhaqdhaqaaqa wareegga tamarta korantada.
Mid ka mid ah cilladaha marka laga reebo saameynta deegaanka ee ay abuureen biyo-xireenka ayaa ah in jiilka tamarta uusan joogto ahayn. Waa in maskaxda lagu hayaa in soo-saarka tamarta la cusboonaysiin karo ay si toos ah ugu tiirsan tahay dabeecadda. Sidaa darteed, helitaanka biyaha ee saxanka biyaha macmalka ah wuxuu ku xirnaan doonaa, markiisa, xukunka ee webiyada. Haddii roobka aaggu ka yaraado, jiilka tamarta ayaa noqon doona mid aan waxtar badan lahayn.
Dhaqanka waddamada qaar ayaa ah in habeenkii lagu shubo biyaha kaydadka korontada laga dhaliyo. Tan waxaa loo sameeyaa maxaa yeelay waxaa jira awood siyaado ah oo tamarta haydarka ee maalintii kaydsan dib ayaa loo isticmaalaa. Marka baahida korontada ay sareyso, qiimaha waa sidaas. Marka waxaad helaysaa faa'iido saafi ah oo aad keydisaa tamarta korantada.
Taariikhda tamarta korontada
Kuwii ugu horreeyay ee adeegsada tamarta noocan ah waxay ahaayeen giriigga iyo romanka. Markii hore waxay isticmaali jireen tamar dib loo cusboonaysiin karo oo keliya si ay u socodsiiyaan miraha biyaha lagu shiido si ay u shiidaan galleyda. Markii waqtigu socday, warshaduhu way is beddeleen oo giraangiraha biyuhu waxay bilaabeen inay adeegsadaan tamarta suuragalka ah ee biyuhu leeyihiin.
Dhamaadkii qarniyadii dhexe qaabab kale ayaa loo isticmaalay si looga faa'iideysto tamarta haydarooliga. Waxay ku saabsan tahay giraangiraha korantada. Waxaa loo adeegsaday waraabinta beeraha iyo soo kabashada aagagga qoyan. Shaagagga biyaha ayaa wali loo adeegsadaa mashiinnada wax-soo-saarka iyo soo saarista korantada.
Qiyaastii Kacaankii Labaad ee Warshadaha giraangiraha biyaha ayaa isu rogay marawaxadaha biyaha. Waa mashiin la dhisay iyada oo la adeegsanayo giraangiraha dhajiska on dariiq dhexaad. Cusboonaysiinta teknolojiyada waxay noqotay mid si heer sare ah u dhammaystiran oo shaqeynaysa.
Marawaxadaha ayaa ka soo fiicnaanayay waxtarka beddelka tamarta suuragalka ah ee biyaha ee wareegga tamarta wareegga iyadoo lagu dabaqay fallaadh.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad awood u yeelatay inaad waxbadan ka barato tamarta la cusboonaysiin karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » tamarta Haydarooliga » Tamarta Haydarooliga
Nidaamyada keydinta tamarta